27-inch iMac cusub ku dari doonaa midabyo yar oo kala duwan kuwa hadda | waxaan ka imid mac
27-inch iMac cusub ayaa ku dari doona midabyo yar oo kala duwan kuwa hadda
Dhawr daqiqid ee u danbeyay daadad ayaa tilmaamay in imaatinka ee moodooyinka cusub ee 27-inch iMac (taas oo laga yaabo inay dhab ahaantii ka weyn tahay) waxay ahayd aad ugu dhow bilawga wax soo saarka tirada badan ee kooxaha iyo hadda waxay ka faalloodaan in midabada ay sidoo kale noqon karaan jilayaasha kooxahan cusub.
Oo waa tan iyo markii la bilaabay iMac 24-inch oo midabyo kala duwan ah waxay u muuqataa in isbeddelka Apple uu si sax ah u ahaan doono sidan, si loo sii wado waxa la bilaabay. Runtii kooxahan cusub ee 27 ama 30 inch ah waa inay yimaadaan sanadkan soo socda, laakiin sida iska cad wax walba waxay ku xirnaan doonaan yaraanta qaybaha iyo faahfaahinta kale ee ka baxsanaysa Apple lafteeda. Waxaa laga yaabaa in ay soo bandhigaan, oo kaydiyaan dhowr, oo ay xoogaa socdaan iyagoo ku saleysan iibka.
Midabada haa, laakiin waxa laga yaabaa inay aad u miyir beelaan moodelka weyn
Laakiin waxa muhiimka ah hadda waa in la ogaado inta ugu badan ee suurtogalka ah ee faahfaahinta lagu dari karo qalabkan cusub waxayna u muuqataa in aysan si sax ah u noqon doonin midabo isku mid ah oo aan ku leenahay moodooyinka hadda jira. Isticmaale Twitter-ka @dylandkt ayaa sheegay dhowr toddobaad ka hor taas iMac-ga cusub ee 27-inch wuxuu ku dari doonaa naqshad la mid ah kan hadda jira ee 24-inch kaas oo la bilaabay horaantii sanadkan, laakiin leh palette midab madow oo xoogaa miyir qaba. Tani waxay maanta ka xasuustaan MacRumors.
Way fiicnaan lahayd haddii Apple ay ku darto midabada moodooyinka cusub ee iMac ee waaweyn laakiin sidoo kale way fiicnaan kartaa haddii moodooyinkani ay midab ahaan ka duwan yihiin moodooyinka hadda. Waa macquul in laga fekero in isticmaalayaasha badankood ay jeclaan karaan iyaga laakiin had iyo jeer Waxaa fiican in la helo midabyo kala duwan oo badan. Waxa cad oo la xaqiijiyey waa in iMac-yadani ay ku dhejin doonaan soo-saareyaasha Apple, Apple Silicon-ka iyo iyaga oo isbeddelku ku iman doono inta ka hartay tirada Mac inta lagu jiro sanadka. Awoodda, hufnaanta iyo qiimo aad jaban oo aad u jaban ayaa barbar socda soo-saareyaashan awoodda badan ee Apple M-processors.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » 27-inch iMac cusub ayaa ku dari doona midabyo yar oo kala duwan kuwa hadda
Sida loo dhejiyo fiidiyow si degdeg ah u dhaqdhaqaaqa Mac
Keenista 2 saacadood ayaa lagu daraa qiimo dhan € 0 dukaamada Apple